Book of Esther [Baiboly 1865]
Estera [Baiboly Katolika]
Estera [Bible de Jérusalem]
Est 11:1 Tamin' ny taona fahefatra nanjakan' i Ptolemea sy Kleopatra, Dositea izay nilaza azy ho mpisorona, avy amin' ny taranak' i Levì, sy Ptolemea zanany, dia nitondra izany taratasy momba ny Frorai izany, izay lazain' izy ireo ho tena marina sy nadikan' i Lisimaka, zanak' i Ptolemea ao Jerosalema.
Est 11:2 Tamin' ny taona faharoa nanjakan' i Asoerosa mpanjaka lehibe, andro voalohan' ny volana Nisàna, dia nanonofy Mardokea, zanak' i Jaira, zanak' i Semeì, zanak' i Sisa, avy amin' ny firenen' i Benjamina.
Est 11:3 Izy io dia Jody, nipetraka tao an-tanànan' i Sosa, lehilahy malaza anisan' izay ao an-dapan' ny mpanjaka.
Est 11:4 Isan' ny babo nentin' i Nabokodonosora mpanjakan' i Babilona, avy any Jerosalema, niaraka tamin' i Jekoniasa, mpanjakan' i Jodà izy.
Est 11:5 Izao no nofiny: Tampoka, injay nisy feo, tabataba be aman-kotrobaratra, ary nihorohoro sy nikorontana ny tany.
Est 11:6 Tampoka indray, nisy dragona roa lehibe nandroso samy vonon-kiady.
Est 11:7 Nandefa feo mafy izy ireo, ka tamin' ny feony, dia nivonon-kiady ny firenena rehetra, hamely ny vahoakan' ny olo-marina.
Est 11:8 Tampoka indray, nisy andro maizina sy aizim-pito, nisy horohoro aman-tebiteby, sy fahoriana amam-pivadiham-po teto ambonin' ny tany.
Est 11:9 Natahotra ny hozoin' ny loza mafy indrindra ny vahoakan' ny olo-marina manontolo ka velom-panahiana sy nioman-ko faty.
Est 11:10 Nitaraina tamin' Andriamanitra izy ireo, ary tamin' ny fitarainany, dia nisy toa loharano kely, nivoahan' ony lehibe sy rano be.
Est 11:11 Dia namirapiratra ny hazavana sy ny masoandro, ka tafasandratra ireo tanatin' ny fahasimbana, ka nandrapaka ireo tanatin' ny voninahitra.
Est 11:12 Nony avy nahita izany nofy izany sy izay efa nokasain' Andriamanitra hatao Mardokea, dia nifoha sy nitana izany tao an-tsainy, ary nanao izay tratry ny ainy, mandra-pahalin' ny andro, hahalala izay hevitr' izany.